Izizathu Eziyisizathu Sokuba Isikhathi Sesikhathi Sesikhathi Esihle Kungcono Kunesikhathi esifushane-I-SEO eqinisekisiwe ngu-Semalt
Ukusebenzisa injini yokusesha noma i-SEO yindlela esetshenziswe nguamabhizinisi ahlukene ekukhangiseni kwe-intanethi. Kodwa akulula kakhulu kumakhasimende ukubona isithombe esikhulu uma kuziwa ekusebenziseniisistimu yokuthengisa ye-intanethi esebenzayo ngokushesha nje lapho iningi labo lifisa ukubona imiphumela esheshayo kanye nemoto eminingi kumasayithi abo.Lokhu kwenza abathengisi bedijithali bagxile esikhathini se-SEO esifushane ukuthola ama-rankings okusheshayo kuma-Search Results Pages (SERPS). Nokho,lokhu akuyona indlela yokwakha ubukhona obukhona be-inthanethi ebhizinisini lakho - atoperal baby kreme. Isikhathi esifushane SEO sisebenza kahle ngezinga elithile laphoukugxila kwi-SEO yesikhathi eside kukusiza ekwakheni isu elivuzayo.
uMichael Brown, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende i-Semalt idijithaliImisebenzi, inikeza izizathu ezinhlanu zokuthi kungani isu le-SEO elide likhula ngokwengeziwe.
Ama-algorithms wokusesha okuguquguqukayo
Izinguquko eziqhubekayo ze-algorithms yokusesha injiniithuthukiswe yi-Google isebenza izingxoxo ezishisayo ekukhangiseni kwedatha. I-Google inhloso yokuhlinzeka abasebenzisi nge-high-quality spam-freeimithombo yewebhu kodwa amawebhusayithi amaningi azizwa umthelela omubi walezi zinguquko ngokubona okuphansi kokuseshwa nokulahlekelwa kwe-intanethiukubonakala. Ngaphandle kokuthuthukiswa okuqhubekayo ekusebenzeni kwe-SEO yenkampani akunakwenzeka ukuhambisana nokuhamba kwalezo zinguquko.Kufanele uhlale uphephile kusuka kuzibuyekezo ezizayo ngokuqinisekisa ukuthi isayithi lakho liyi-injini yokusesha efanelekile.
I-SEO enhle ixhomeke kokuqukethwe okusha
Ukuguqulwa kwe-algorithm ye-injini yokusesha kubeka phezuluukubaluleka kwezibuyekezo ezivamile, okuyizinto ezibalulekile ezikusiza ukuthi ugcine i-SEO enhle. Empeleni, okuqukethwe okusha kudlala okubalulekilenendima ekukhangiseni kwe-digital, ukuba yingxenye yecebo lakho le-SEO lesikhathi eside. Umnikelo wempumelelo yokuthengisa kwakho kwe-intanethiimikhankaso inzima ukulinganisa.
Abasebenzisi be-Intanethi ye-Intanethi
Insimu ye-intanethi ye-Mobile iye yenziwa ngendlela engavamileukukhula phezu konyaka ombalwa odlule, namuhla ngaphezu kwengxenye ye-intanethi ye-intanethi isuka kumadivayisi eselula. I-SEO yeselula ingenyeizici ezingapheliyo zamaqhinga we-SEO asekude, okuqinisekisa ukuthi abasebenzisi be-intanethi bangathola ukufinyelela kokuqukethwe ngamadivayisi eselula. Ukwenzaamawebusayithi aphendula kunoma yikuphi usayizi wesibuko umsebenzisi anakho, kunengqondo ukudala okuqukethwe okusebenza kahle ngezintambo eziphendulayokanye nezakhiwo.
Ukwakha iphrofayli ye-backlink iyinhloko esemqokaI-algorithm yesimo se-Google ihlaziya. Noma kunjalo, ukuhlaziywa okucacile nakho kuyashintsha. Ngakho-ke, i-SEO yesikhashana ingaholela ekugaxekeni nokungahambi kahleizixhumanisi zokwakha izixhumanisi, okusho ukuthumela izixhumanisi zakho ngokungahleliwe. Ngokusebenzisa ukwakha isixhumanisi kuhlelo lwakho lwe-SEO lwesikhathi eside, uzogwemaIjeziso ze-Google futhi udale isu eliphakeme eliphezulu ngekusasa.
Umgomo oyinhloko we-SEO ukubeka iwebhusayithi yakho namakhasiezikhundleni eziphezulu zemiphumela yosesho noma okungenani ukuzitholele ekhasini lokuqala, noma kungcono okwamanje, kufakwe emikhondweni ye-Google. Iwebhuabathengisi basebenzisa izindlela ezehlukene ukuze bafinyelele ezikhundleni eziphezulu emiphumeleni yosesho ngoba yilapho ithrafikhi iningi ivela khona. Okunconoindlela yokuthola khona ukusebenzisa isu eliyinkimbinkimbi ye-SEO isu.